Uyokhethwa engqungqutheleni ozovala esiKaMagwaza-Msibi
IFIKE ngobuningi bayo iNFP izophelezela umholi wayo uNkk Zanele Magwaza-Msibi Isithombe : NQOBILE MBONAMBI/AFRICAN NEWS AGENCY (ANA)
IPHINI likaMengameli weNFP, uMnuz Jeremiah Mavundla, lithi akukho ukuklwebhana nokubangwa kwesikhundla somholi oshonile uNkk Veronica Zanele Magwaza Msibi (59), ngoba kuzoyiwa engqungutheleni yobuholi kuyokhethwa.
UMavundla ubekhuluma ngoMgqibelo enkonzweni yomngcwabo kaNkk Magwaza-Msibi ebisesishayamthetho esidala oLundi. UKaMagwaza-Msibi ungcwatshwe ngokohlelo lombuso esigabeni sesibili.
UMavundla uthe bazodedela ingqungquthela ikhombe abaholi abazoqhubeka bahole iNFP.
“Uma kudlula ukhetho nje, sibiza ingqungquthela yokukhetha ubuholi. Siyokhetha ubuholi obusha. Ngeke sigweve sithi, yithi esihleli lapha, bese sithatha inkomfa sibaleke nayo siyibelethe emhlane,’’ kusho uMavundla, obekhuluma kuchwaze amalungu eNFP abethe nikilili ngaphandle kwetende.
Utuse ubuqhawe bukamufi wathi ngeke bamkhohlwe futhi bazoqhubeka lapho egcine khona.
Indodakazi kamufi uNksz Gugu Gumede, elingisa indawo kaMaMlambo kuZalo, igalele kwezwakala ngonina. Umfanise nenkosi uqobo lwayo wathi unina ube yiqhawe kwaze kwaba sekugcineni.
“Akehlulekanga umama kodwa unqobile futhi ungaphezu kwendlovukazi, uyinkosi uqobo. Ungowesifazane obe nesibindi kakhulu futhi ukwazile ukuhola iqembu lakhe wahola nomndeni wonke. Umsebenzi wakhe uzoqhubeka ngeke uphele,’’ kusho uNksz Gumede, indodakazi kamufi.
UNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMnuz Sihle Zikalala uhambe emazwini ezikhulumi ebabazana ukukhuthala nobuqhawe bukamufi. Uthe umufi ubengomunye wabesifazane abanesibindi abayibambe ishisa.
Obekhulumela i-IFP uMnuz Nhlanhla Msimango, uthe ngeke bakufihle ukuthi umufi usebenze kakhulu esaphila. Uthe uNkk Magwaza-Msibi ufana nengane ekhuliswe yi-IFP futhi ngeke bayeke ukududuza umndeni nabo bonke abahlekelwe.